Koonfur Afrika -
Flashback: tani waa waxa kadhacaya wadanka South Africa dadka cadaanka ah (reer galbeedka), waa kaliya bilowga cadawgayga (reer galbeedka) walaalahay, gacmahoodu waa isbucinayaan… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Nofeembar 20, 2019 12: 00 No Comments
Ninkii caqli lahu wuu ka xishoodo khaladaadkiisa, laakiin ka xishoon maayo inuu saxo: waxaa wanaagsan inaad saxdo khaladaadkaaga ka hor intuusan daaho inaad ka faa'iidaysato oo si xun ula dhaqanto ...	Akhri wax dheeraad ah
Julius Malema, hogaamiyaha xisbiga EFF (Dhaqdhaqaaqa Xoriyada Dhaqaalaha), ayaa si daacad ah u raali galinaya asaga oo ku hadlaya magaca South Africa magaca Ramaphosa Blunders: Waxaan maanta ceeb ka yahay in magacaygu yahay Koonfur Afrika, sawirada naxariis darada ah ee nooga imanaya magaalooyinka dalka qaarkood gebi ahaanba waa wax aan loo dulqaadan karin, waxaad laaysaa dadka madow / Afrikaanka, waxaad xasuuqaan walaalahaaga Madowga / Afrikaanka ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: September 9, 2019 7: 07 No Comments
Waligeey ma arkin inaad ku dhuftay nin shiine ah, nin cad, Hindi ah, waxaadna ku sheegtey inaysan haysan wax waraaqo ah. Adoo fiirinaya waxaad ku sameysay walaalahaaga Madowga / Afrikaanka ah, ...	Akhri wax dheeraad ah
Xagee bay ka yimaadeen naceybkii kala jeexanaa South Africa oo ay u badan tahay inuu ku faafo wadamada kale ee Afrika? Walaalaha Madowga / Afrikaanka Walaalaha ah iyo Malaaqa ah, maxaad ka fileysaa "shisheeyaha" luuqadaha Afrika ?? Ereygu miyuu ku qoran yahay luqadaha Afrika ?? Oo intee buu ereygan "nacayb-nacayb" jiray jiritaanka ??
Posted By: KongoLisolowaa: September 9, 2019 5: 30 No Comments
Si nacaybku u siiyo dariiqa jacaylka ee Afrika, kalmadda "Jacayl" waa in lagu duulaa Afrika. Waa inaan qodnaa, oo aan had iyo jeer isku hallaynaa falkii "Waan jeclahay" dhammaan ...	Akhri wax dheeraad ah
Ku jees jeeska ah ee Afrika ay ilaalinayaan dadka Madowga / Afrikaanka laftooda: Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii dadka Madowga / Afrikaanka kaliya ay fahmaan baaxadda khatarta ay leedahay qatarta ay Afrika ku hayaan? … (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: September 9, 2019 3: 03 No Comments
Marka la daabaco sawirrada naxdinta leh ee dilalkooda, dhibaatooyinka, "Buzoberies", ama xitaa ka sii wanaagsan naceybka waddamadooda (qaaradda) adduunka oo dhan hortiisa, miyaanay soo bandhigin wax lagu qoslo oo ka ...	Akhri wax dheeraad ah
Taariikhda kama beddeleyno; "Taariikhdu wali waa taariikh" ma jirto wax isku day ah oo la doonayo in la beddelo ama been laga sheego, maxaa yeelay xaqiiqooyinka jira ayaa jira, way madax adag yihiin: Jarmalku wuu diidayaa wixii magdhaw ah ee ku saabsan dambiyadiisii ​​gumeystaha ee Namibia iyo Cameroon
Posted By: KongoLisolowaa: August 19, 2019 4: 44 No Comments
Faracii dadkii ka ganacsanayay ragga ma doonayaan in loo sheego in waalidkood weyn ay ka heleen nasiib iyaga oo ka iibinaya ragga ama u adeegsanaya sidii adoomo, xitaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Admi1waa: July 27, 2019 12: 50 No Comments
Runta, runta, waxaan kuu sheegayaa, Hollywood ayaa dili doonta, kadib filimka "White Firs", hadda waa "Shaka Zulu white" oo 100 sano, ayeeyadeenna weyn ...	Akhri wax dheeraad ah
George Rawlinson, oo ah qoraa Ingiriis ah, wuxuu qoray buug la yiraahdo Taariikhda Masar: bogga 252, wuxuu bixinayaa sharraxaad Seti I, wuxuu ku dhawaaqay "Wajiga SETI wuxuu ahaa mid taxaddar leh Afrikaan, waxay lahayd weji STORMY leh. niyad jabsan FLAT sanka, bushimaha qaro weyn iyo culus CHIN »
Waligaa ha ka daba marin qof aan qiimo lahayn, ha ahaato nin ama naag: haween badan ayaa u maleynaya in haddii aysan xidhiidh la lahayn nin si uun ama mid kale, waxay ku fashilmeen
Afrika: SOS dambiilaha ah ee caruurta fayow, "Qaali Afrikaanow, ilaali; yaan cidi khiyaanayn ama kugu khiyaanayn ilmo korsashada carruurtiina ”… (VIDEO)
Feb24 09: 18